Abavelisi kunye nabathengisi be - Blackout Sunset
Umgangatho ophezulu we-Roller Roller Blinds amalaphu
Ilaphu le-Sunetex Blackout Roller Blind ilaphu lenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Sinokubonelela nge-200/230/250/300/300 cm ububanzi obuhlukeneyo ngefestile yakho, kwaye ubude obuqhelekileyo ziimitha ezingama-40 kuluhlu ngalunye. Amandla aphezulu e-polyester enza amalaphu ethu 'amandla aphindwe kabini kunenylon kunye namaxesha angama-20 aphezulu kune-viscose; Ukuqina okufanelekileyo kwenza iimveliso zethu ziqine, zomelele, zibe nemibimbi. Ngaphandle koko, ilaphu lethu le-polyester linobushushu obuphezulu kunye nokugquma kobushushu. Abangabo ukungunda, akukho manundu, akukho deformation, akukho ndawo emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Ngombala wobuso obunemibala emibini yokutyabeka iglu, eyenza ukuba ibe nefuthe elihle ekugcineni ukukhanya. Ilaphu lethu luthintelo lomlilo kwaye alunamanzi, linokudlula kwi-NFPA701（i-USA）isatifikethi, kunye nokukhawuleza kombala ukuba iBanga 4.5. Umgangatho ophezulu we-polyester eluhlazaal yenza amalaphu zethu zithandwa phakathi abathengi bethu. Sifanele isikolo, iofisi kunye nasekhaya. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe!
Umgangatho ophezulu we-Roller Blinds Fabric Polyester Blackout
I-Sunetex Blackout Roller Blind Fabric yenye yezona mveliso zaziwayo phakathi kwabathengi bethu. Yenziwe nge-100% ipholiyesta. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa, kwaye iyabukeka. Sinokubonelela nge-200/230/300 ububanzi obuhlukeneyo onokukhetha kubo. Ubunzima belaphu lethu ngu-360gsm ngemitha nganye. Ngombala weglu kunye nendlela yokugaya emhlophe, ilaphu lethu elimnyama linomgangatho ophezulu. Sinemibala yefashoni engaphezulu kwe-10. Kwaye sineentlobo ezahlukeneyo zokhetho lwakho, unokukhetha nabani na.
Ilaphu lethu luthintelo lomlilo kwaye alunamanzi, linokudlula kwi-NFPA701（i-USA）isatifikethi, kunye nokukhawuleza kombala ukuba iBanga 4.5, elenza ukuba linandiphe udumo oluphezulu phakathi kwabathengi bethu. It'zilungele kakhulu isikolo, ikhaya kunye nokusetyenziswa kweofisi. IntoniNgaphezulu, sinokunikela ngeesampuli zasimahla kuwe!
Iifestile zangaphakathi eziMnyama ezingasasebenziyo kwiOfisi
I-Sunetex yangaphakathi yeefestile eziziMnyama Ilaphu leOfisi yenziwe nge-polyester esemgangathweni. Kuzinzile, akukho mngundo kwaye akukho nundu. Sineentlobo ezininzi zemibala yamandulo ngokhetho lwakho. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka. Amalaphu ethu akhusela amanzi kunye nokuthintela umlilo. Yenza abathengi bethu babe noxolo lwengqondo xa usebenzisa iimveliso zethu.
UJacquard Roller Blinds Fabric Umnyama
Iimveliso zeSunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series zenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu. Sinikezela amalaphu jacquard ngeendlela ezahlukeneyo ukutyabeka. Ubuso obuphindwe kabini bendlela yokutyabeka bunokwenza amalaphu amnyama amnyama, indlela yokugaya emhlophe enogwebu inokwenza amalaphu amnyama. Iimveliso zethu zilungele isikolo, iofisi kunye nasekhaya. Wamkele imiyalezo yakho!
I-Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric iyonwabela kakhulu kubathengi bethu. Sineentlobo ezininzi zamalaphu ekukhetheni kwakho, into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa, kwaye iyabukeka. Kwaye sineqela elilungileyo onokubonelela ngenkonzo elungileyo, sigxile kumava enkonzo elungileyo yomthengi ngamnye kwaye sizama ukudala umoya ofudumeleyo. Ngentsebenziswano yethu yokuqala, sinokukunika iisampulu zasimahla zokujonga umgangatho kunye nombala.
Ukuhonjiswa kwangoku kweRoller Blind Fabric emnyama
I-Sunetex yokuhombisa i-Roller Blind Fabric Blackout yenziwe nge-polyester. Ukwaleka ngombala we-Foam kuyenza ukuba ingacimi nje kuphela, kodwa nakwifashoni. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Ububanzi obuqhelekileyo yi-200cm kunye ne-230cm. Ubunzima obuqhelekileyo ngama-330gsm kwimitha nganye nganye. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya. Sinemibala eyahlukeneyo yokukhetha kwakho.
I-Sunetex yokuhombisa i-Roller Blind Fabric Blackout iyonwabele inqanaba eliphezulu lokuthenga kwakhona kubathengi bethu. Ngelaphu elikumgangatho ophezulu, lihlala ixesha elide kwaye ixesha lokuphila linokuba yiminyaka eli-10. Singumenzi, sithengisa iimpahla kubathengi bethu ngokuthe ngqo, inokukunceda ngokushiya inkcitho ephakathi. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe.
Uyilo olutsha lweRoller Blind Fabric Blackout
Ilaphu le-Sunetex Blackout Roller Blind ilaphu lenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Ngombala wobuso obunemibala emibini yokutyabeka, yenza ukuba kube nefuthe elifanelekileyo ekugcineni ukukhanya kunye nokukhuselwa kwabucala. Izinto ezisemgangathweni zepolyester ezinokuyenza ibe yomelele, kungabikho mngundo, kungabikho nundu, kungabikho deformation, akukho mkhondo emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
Singumenzi wobuchwephesha kwiimfama ngaphezulu kweminyaka eyi-16. Injongo yethu kukuthenga ngokulula okukodwa kubathengi bethu. Sizimisele ukubonelela amalaphu ogqibeleleyo kubathengi bethu. Sinokunikezela ngeesampuli zasimahla kuwe ngentsebenziswano yokuqala.
Umgangatho oLungileyo weeRoller Blinds Fabric Blackout
I-SuneTex Roller Blinds Fabric yenye yeemveliso zethu ezishushu zokuthengisa. Yenziwe ipholiyesta esemgangathweni ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo. Zomelele kakhulu, ubomi bazo bunokuba yiminyaka eli-10. Ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo, sithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Sinikezela ngenkonzo yeeyure ezingama-24 kubathengi bethu ukuba bakuxhase.
Ngendlela yokutyabeka idiphu, eyenza ukuba ibe nefuthe elihle ekungeneni komoya nakwisibane. Inokukunceda ugcine amandla. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini. Singumboneleli wokuqala wefektri, ukuba uyasebenzisana nathi, unokuba nomda omkhulu. Ukusebenzisana kokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe!
I-Roller Blind Blackout Curtain Ilaphu 180g
I-Sunetex Roller Blind Blackout Curtain Fabric yenziwe nge-100% ipholiyesta esemgangathweni. Ngezixhobo ezisetyenziswayo ezikumgangatho ophezulu, zenza ilaphu lethu ngamandla aphezulu. Sinikezela amalaphu jacquard ngeendlela ezahlukeneyo ukutyabeka. Ngetekhnoloji yokusika ye-ultrasonic, eyenza ilaphu lethu lisikwe ngokufanelekileyo. Sineentlobo ezininzi zamalaphu onokukhetha kuwo, into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka.
Silawule ngokungqongqo umgangatho weemveliso zethu. Zonke iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo. Iqela lethu linikezela ngeenkonzo ezingama-24 ezilungileyo kuwe. Sijolise kumava enkonzo elungileyo yomthengi ngamnye kwaye sizama ukudala umoya ofudumeleyo. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe!
Ilaphu leRoller Blind Blackout Ilaphu le-100%
Ilaphu le-Roller Blind Fabric lenziwe nge-100% ipholiyesta enomgangatho ophezulu. Ubunzima obuqhelekileyo yi-160 g ngesikwere semitha nganye. Ngobunxibi bobuso obunxibileyo, ilaphu lethu limnyama. Sineentlobo ngeentlobo zamalaphu ekukhetheni kwakho.Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka. Yamkelwa ngamalaphu anobungane kwindalo esingqongileyo, ayityhefu kwaye ayinambitheki eyenza imeko entle kuwe.
Iimveliso zethu zithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Kwaye kunokukunceda ukukhanya okulawulekayo, ukukhanya okuhambisanayo kokukhanya kwangaphakathi, ukufiphaza kunye nokulawulwa kweqondo lokushisa, kunye nokukhuselwa kwe-ultraviolet. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, kwaye ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Sinokukunika iisampulu zasimahla zokujonga umgangatho kunye nombala.
I-Roller Blinds Blackout Ilaphu lePolyester
Ilaphu le-Sunetex Blackout Roller Blind Fabric zenziwe nge-polyester enomgangatho ophezulu kunye nabalinganiswa abalungileyo. Iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo, yomelele, akukho mngundo kwaye akukho nundu. Sinemibala emhlophe emhlophe nengwevu ngokhetho lwakho. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka.
Ngendlela yokutyabeka ubuso ngobuso ephindwe kabini eyenzayo, Ilaphu leSunetex Slubby yarn yenye yeemveliso zethu eziphezulu zokuthenga kwakhona. Inokukunceda ukuba uhlengahlengise ukukhanya kwangaphakathi, ubonelele ngendawo efanelekileyo kuwe. Sinikezela iwaranti yeminyaka eli-10 kuwo onke amalaphu ethu. Ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo, sithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Ngokubambisana okokuqala, sinokunikela ngeesampuli zamahhala kuwe.
Uluhlu oluLuhlaza oluLuhlaza iimfama ezinamacala amhlophe
I-Sunetex Slubby yarn Blind Ilaphu yenziwe ngee-polyester amalaphu amnyama anomgangatho ophezulu. Ngogwebu ukutyabeka okumhlophe, kwenza ilaphu licinywe. Oomatshini abaphambili kunye netekhnoloji iyenza ukuba isikwe ngokucocekileyo. Sinemibala eyahlukeneyo enemibala, ungadibanisa nawuphi na umbala owuthandayo.Singakunika i-200/230/250/300/300 cm ububanzi obahlukeneyo befestile yakho, kwaye ubude obuqhelekileyo ziimitha ezingama-40 kuluhlu ngalunye. Sineentlobo ngeentlobo zamalaphu onokukhetha kuzo, unokukhetha nayiphi na.
Yamkelwa ngamalaphu anobungane kwindalo esingqongileyo, ayityhefu kwaye ayinambitheki eyenza imeko entle kuwe. Yenza abathengi bethu babe noxolo lwengqondo xa usebenzisa iimveliso zethu. Umsebenzi wethu kukubonelela ngesisombululo esifanelekileyo sekhethini kubaxumi bethu ngokweemfuno zobungakanani bewindows zabathengi. Sinokukunika esona sisombululo sefashoni. Sinokubonelela ngesikhokelo sokufakwa kufakelo kubathengi kwihlabathi liphela.
Ingubo ephezulu yeThafa eliMfama
Indwangu ye-Sunetex ephezulu ye-Plain Blind yenziwe nge-100% ye-polyester enamandla amakhulu. Inesakhono esihle sokwenza umthunzi. Inokucoca imitha ye-ultraviolet, yenze iofisi yakho ikhululeke ngakumbi ekusebenzeni. Ineziphumo ezilungileyo zokungenisa umoya nayo. Ngendlela yokutyabeka yesilivere, ilungile kwaye inyukile. Kwaye iimveliso zethu zomelele kakhulu kwaye zihlala ixesha elide. Sinokubonelela nge-200/230/250/300/300 cm ububanzi obuhlukeneyo ngefestile yakho, kwaye ubude obuqhelekileyo ziimitha ezingama-40 kuluhlu ngalunye. Sinemibala eyahlukeneyo yokukhetha kwakho.
Singumenzi wobuchwephesha kwiimfama ngaphezulu kweminyaka eyi-16. Sithengisa amalaphu amfamekileyo kunye nezixhobo. Injongo yethu kukuthenga ngokulula okukodwa kubathengi bethu. Ukwenza ubomi bakho bube ngcono, sizama konke okusemandleni ethu ukukunika amalaphu afezekileyo. Sinokunikezela ngeesampuli zasimahla kuwe ngentsebenziswano yokuqala.